Wɔkɔ So Kyekye Yehowa Adansefo a Wɔwɔ Russia De Wɔn Gu Afiase | JW.ORG Amanneɛbɔ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Armenian Azerbaijani Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Korean Sign Language Lithuanian Malagasy Malay Myanmar Norwegian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Twi Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Yoruba Zulu
October 2018 mu no, polisifo bɔ wuraa afie bɛboro 30 mu wɔ Russia atɔe fam. Wɔkyeree mmarima nsia ne mmea mmienu a wɔyɛ Yehowa Adansefo efisɛ aban no se wotutu ɔman ase. Wɔde wɔn koguu afiase bere na wonnii wɔn asɛm. Seesei, anuanom mmarima ne mmea 25 na wɔn ho nni asɛm nso wɔde wɔn agu afiase, na anuanom 18 nso de, wɔahyɛ sɛ mma wommpue mfi baabi a wɔte no.
October 7, Sychyovka, Smolensk Mantam—Polisifo ne asraafo bi a wɔde nneɛma ahyehyɛ wɔn anim bɔ wuraa afie nnan mu kɔhwehwɛɛ hɔ, na wɔkyeree anuanom mmea mmienu. Baako din de Nataliya Sorokina, wadi mfe 43. Baako nso din de Mariya Troshina, wadi mfe 41. Nnanu akyi no, Leninsky Mantam Kɔɔto no de yɛn nuanom mmea no too afiase sɛ anka wobedi wɔn asɛm November 19, 2018. Nanso eduu November 16, 2018 no, Leninsky Mantam Kɔɔto no san de abosome mmiɛnsa kaa ho. Enti February 19, 2019 na wobedi wɔn asɛm.
October 9, Kirov, Kirov Mantam—Anyɛ yiye koraa no afie 19 na wɔbɔ wuraa mu kɔhwehwɛɛ hɔ. Wɔkyeree asafo mu mpanyimfo nnum. Akyiri yi wɔde wɔn koguu afiase bere a na wonnii wɔn asɛm. Wɔn mu nnan (Maksim Khalturin, Vladimir Korobeynikov, Andrey Suvorkov, ne Evgeniy Suvorkov) yɛ Russiafo, na baako a ne din de Andrzej Oniszczuk fi Poland. Enti Dennis Christensen a ofi Denmark da nkyɛn a, Onua Oniszczuk ne onipa ɔto so mmienu a omfi Russia, ne ho nni asɛm, nanso ne gyidi nti wɔakyere no.
October 18, Dyurtyuli, Republic of Bashkortostan—Anyɛ yiye koraa no, polisifo bɔ wuraa afie 11 mu kɔhwehwɛɛ hɔ na wogyee sika, kaad a wɔde yi sika wɔ sikakorabea, mfoni, nkrataa, kɔmputa, SIM kaad, ne fon ahorow. Wɔkyeree asafo mu panyin a ne din de Anton Lemeshev. Akyiri yi wɔde no too afiase abosome mmienu bere a na wonnii n’asɛm. October 31, 2018 no, woyii no fii afiase maa ɔkɔɔ fie. Nanso wɔahyɛ sɛ, ɛnsɛ sɛ opue fi fie hɔ kɔ baabiara.
Ɛwom sɛ anuanom a aka a wɔwɔ Russia no, wɔn nso polisifo betumi abɔ awura wɔn afie agye wɔn nneɛma, nanso wɔkɔ so bɔ mpae ma wɔn nuanom a wɔn ho aka no, na wɔma wɔne wɔn mmusua nya nea wohia. Kosi sɛ ɔhaw yi nyinaa to betwa no, anuanom a wɔwɔ wiase nyinaa bɛkɔ so de nkotɔsrɛ akɔ Yehowa anim ama wɔn nuanom a wɔwɔ Russia no na wɔabɔ ebinom mpo din wɔ wɔn mpaebɔ mu.—Efesofo 6:18.
Share Share Wɔkɔ So Kyekye Yehowa Adansefo a Wɔwɔ Russia De Wɔn Gu Afiase
Atumfo a Wɔwɔ Russia Se, Yehowa Adansefo Wɔ “Akode” a “Wɔde Bɔ Ɔman”